Manambatra Ny Fikarakaràna Zaridaina Sy Fihiràna Hip Hop Ny Tanànan’i Kolombià Mba Hamelomana Indray Ny Vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 3:30 GMT
Mpanao hip hop “El Aka” sy mpandray anjara iray hafa mampihatra ny Agro-Art (Taokanto-Fambolena). Sary avy tamin'i Louise Møller, navoaka tao amin'ny Rapolitics.org sy AgroArte teo aloha. Nahazoana fahazoandalana.
Raha làlana ny hip hop, [ary] ao ambany làlana misy ny tontolo, isika ireny zavamaniry maniry eny amin'ny làlana mitriatra ireny. Ny simenitra fomba iray entina hanamafisana ny tena zava-mitranga marina — hilazàna hoe tsy misy zavatra tsy mety.
An'ilay mpanakanto “El Aka” io tsonga eo ambony io, ilay mpanakanto izay miteny fa misy fifandraisana eo amin'ny mozikany sy ny fambolena. Miasa miaraka amin'ireo tanora voahilika ao amin'ny Comuna 13 ao Medellín, Kolombià, izy, izay nanorenany ny fandaharanasa “Voan'ny Ho avy”, izay tsy araka ny fahita, ho an'ireo olona maro, mampivady ny hip hop sy ny fambolena. Milaza i El Aka fa iray amin'ireo fomba tena manan-danja indrindra mba hikolokoloana ny fisian'ny vondrom-piarahamonina ny fampifangaroana “ny fakàna indray ny fitadidiana” sy “ny fahitàna mazava” an'ireo olona miaina ao aminà faritra iray manokana.
“Voan'ny Ho avy” dia natolotra ho an'ireo tanora tsy noraharahiana tao anatin'ireo fanatsaràna ny tanàn-dehibe natao vao haingana tao Medellín. Medellín, tanàna fanta-daza fahiny tamin'ny varo-maizina rongony, ankehitriny kosa tena fahagagana fa malaza amin'ny fanavaozana ny tanàn-dehibe ao aminy. Fa tsy an'ny rehetra akory izany lova mahafinaritra izany hoy i El Aka:
Ao aminà tanàna izay lazain'izy ireo ho manana fahaiza-mamorona, lazaintsika hoe lasa feno famonoana bebe kokoa. [Tamin'io andro io ihany] nanomezan'izy ireo ny tanàna io anarana io, tanora miisa 25 no nisy namono.
Hetsika kolontsaina eny an-tanàn-dehibe iraisampirenena ny Hip hop, izay mamehy ireto zavatra efatra manaraka ireto: rangodrangotra ‘graffiti’, break dance, rap, ary DJs (mpampandihy amin'ny kapila). Ao Medallo (araka ny fiantsoan'ny mponin'i Medellín azy), tena kolontsaina nalaza sy nanan-danja tokoa ny hip hop hatramin'ny taona 1980 — indrindra tany amin'ireo faritry ny tanàna nanana fidirambola ambany. Maro ireo tanora mitombo ao anatin'ny fankafizana ny “mpanao hip hop” malaza eo an-toerana, ary manonofy ny mba halaza toy izany amin'ny sehatra ao an-toerana ihany koa indray andro any. Ao amin'ny firenena toa an'i Kolombià, izay nanjakan'ny ady an-trano nandritra ny 60 taona mahery, ary ao amin'ny tanàna toa an'i Medellín, izay anisan'ireo tanàna nisy ny tena mafy sy nikorianan'ny rà be indrindra tao amin'ny firenena, nitàna toerana lehibe ny hip hop tamin'ny fanoheran'ny vahoaka, tamin'ny fanamboarana fahatsiarovana, ary tamin'ny fiarahana nanenona fiarahamonina voazarazara.
Asehon'ny “Voan'ny Ho avy” ny fomba ahafahan'ny tetikasa voarindra hamorona sy hanohana ireo vondrom-piarahamonina, izay nitambesaran'ny tsindry hazolena sy tsy fahitàna azy ara-tsosialy tany aloha:
Teraka ho toy ny fanoherana teo anatrehan'ny fitoerampako,izay nandevenana olona niisa 300 teo ho eo taorian'ireo hetsiky ny miaramila, ny dingana nataonay. Raha tsy mifanome tànana isika, mbola hitranga ato amin'ity firenena ity ihany ny zavatra toy izany. Ny hanolotra [fanovàna] no tanjona. Nifamono foana isika nandritra ny 60 taona. Tsapantsika fa isika samy isika ihany no nanorina ity firenena ity.
Mampiray tanora eo amin'ny 60 eo ny Voan'ny Ho avy, avy amin'ny Comuna 13, izay samy mampihatra miaraka ny “AgroArte”. Amin'ny fiteny hafa, mampifandray ny fambolena (na famafazana) amin'ny taokanto (hip hop) izy ireo. Amin'izany, mampianatra ireo tanora vehivavy sy lehilahy ny fomba famafazana voa izy ireo, ny fiasàna tany, ary fikarakaràna zaridaina. Mandritra izany fotoana izany, manoratra sy mihira ny mozika hip-hop novokariny manokana ireo mpandray anjara, ary mampiasa ny tononkirany hilazalazana ny zava-mitranga sy ny fihetsempony amin'ny fiainany manokana izy ireo. Amin'ny fambolena voa, alainy ho azy ireo ny toerana voamariky ny herisetra teo aloha. Hovaina ho lasa “sehatry ny fiainana” avy eo ireo toerana, izay mampiseho an'ohatra ny fanoherana ny herisetra.
Maro amin'ireo olona ao Medellín no avy any amin'ireo faritra ambanivohitry ny firenena, mitsoaka ny herisetra any amin'ny faritra misy azy ireo. Ao Kolombià no manana ny isa ambony indrindra indrindra eto an-tany amin'ireo olona nafindra monina ao anatiny ihany. Miaraka amin'ireo olona maro be nifindra toerana ao amin'ilay tanàna, fomba iray ho an'ireo mpifindra monina hahatsiarovany ireo fiainany talohan'ny nandroahan'ireo vondrona mitam-piadiana azy ireo avy any amin'ny tokantranony, ny fambolena toy ny famafazana voa ary ny fikarakaràna zaridaina.
Miaraka miasa ireo mpandray anjara, tsy misy an-tanan-tohatra na hoe iza no mpitarika, ao anaty rafitra boribory miala amin'ny fibodoan'ny olona iray na vitsivitsy ny fahefana. Ny hanorina vondrom-piarahamonina iray ifanilàna vodirindrina mampirehareha no tanjon'ilay tetikasa. Amin'ny fampiasàna ireo faritra izay nisy herisetra sy hetsiky ny miaramila teo aloha, manova ireo faritra ireo ho faritra fahatsiarovana sy fahamendrehana ny Voan'ny Ho avy.
Tsy mino ny fahefana an-databatra sy ireo mpanao politika izahay, fa mino ny fahafahan'ny olona hamorona. Ary ny hanaovany fangatahana amin'ny alalan'ireo hetsika ataony.
Mampiseho endrika toerana iray natao ho fihaonana ihany koa ilay fandaharanasa, izay andehanan'ireo mpiray vodirindrina miaraka mba hanatsara ny vondrom-piarahamonina. Manana tanjona ny hampirindra milamina ny fiarahamiaina ary hanamboarana fiarahamonina feno fahatokisana, io fomba fampiarahana io.
Afaka hita eto ambany ireo hira sasany avy amin'ny Voan'ny Ho avy:
Mampiseho an'i El Aka sy ny AgroArt eo am-perinasa ny lahatsary manaraka (amin'ny fiteny Espaniola):
Ho an'ireo izay liana ny hahafantatra bebe kokoa ny zavatra ataon'ny Seeds of the Future, misy lahatsary maro ao amin'ny Barrio Bajo Producciones,YouTube an'ny AgroArt.